Video na-ewetara enyi na Spanish | eactivo | Spanish maka kwabatara
Nke a bụ a ọhụrụ video. Anyị na-egosi a ga-ekwe omume nke na-anọghị n'ozi ngosi, e nwere ihe ize, ma-echeta mgbe nile na-enye abụọ kisses!
Begoña ewebata m ka nwanne ya nwaanyị. Ọ bụ a maara ọnọdụ na-enye anyị dos besos.
1. The ekele:
N'etiti ndị enyi: Nnọọ, kedu ka ị mere?
Azịza: Ọ dị mma nke ukwuu
Ị na-egosi: N'ihe ngosi nke Ọmụmụ idaha, n'anya, Delia.
Ị na-anabata okwu: Hi, otú banyere, Anọgidewokwa na-anyụ.
Rịba onye video ugbu a na-eme na enyi!
Ebe a bụ na transcript nke video kwuo: Transcript n'ihu.
Bipụtara: Ọbuọtde A1, Graded ngosiputa, Videocast A1
3 Comments “N'ihu”
February 21, 2013 na- 22:17
Dị nnọọ mma video! Daalụ maka ekere òkè na anyị!
October 13, 2014 na- 22:15
Ọ ga-abụ ihe na-akpali ma ọ bụrụ na zuru ezu kwuo nke video hụ zuru ederede.
October 17, 2014 na- 16:38
Daalụ maka gị ikwu Juan Ignacio, anyị na-aghọta n'ụzọ zuru okè. Anyị chọrọ na-elekwasị anya naanị na ndabere nke mkparịta ekele na malite izi, nke na ọ bụ ihe mgbaru ọsọ na-amụta, Ọ dịghị mgbakwunye. Ma, anyị ga-atụle gị ikwu na anyị ga tinye zuru kwuo na ihe mmezi ngalaba.